Isu galmoodka sharciga Ingriiska, Wales iyo Waqooyiga Ayrland - The Reward Foundation
Bogga ugu weyn Isu galmoodka sharciga Ingriiska, Wales iyo Waqooyiga Irland
“Jinsi” ma aha erey sharci ah, laakiin waa mid ay adeegsadeen aqoonyahano iyo saxafiyiin. Si kastaba ha noqotee waxay yeelan kartaa dib-u-celin sharci ah oo daran kuwa ku hawlan, gaar ahaan carruurta, oo u arka inay tahay u kaxaynta aan dhib lahayn. Booliisku waxay haystaan ​​xukunno dhowr ah oo sharciga dembiyada ah kuwaasoo ay ku dacweynayaan dambiilaha. Ka fiiri shaxda kore tusaalooyin dhowr ah. Research waxay muujineysaa in si joogto ah loo isticmaalo sawir-galmeedka dhiiri-gelinta galmada iyo internetka, gaar ahaan wiilasha.
Intii u dhaxeysay 2016 iyo 2019, in ka badan 6,000 oo carruur ay da'doodu ka yar tahay 14 sano ayaa booliisku baaris ku sameeyay dambiyada galmoodka, oo ay ka mid yihiin in ka badan 300 oo da 'dugsi hoose ah. Tan article ee wargeyska The Guardian wuxuu iftiiminayaa qaar ka mid ah arrimaha.
Sharciga Isgaarsiinta 2003 wuxuu ka hirgala UK oo dhan. Si kastaba ha noqotee dembiyada kale ee galmada la xiriira waxaa lagu ciqaabi doonaa sharciyo kaladuwan gudaha England, Wales iyo Waqooyiga Ireland iyo Scotland. Soo saarista, haysashada iyo qaybinta sawirada aan sharciga lahayn ee carruurta (dadka ka yar da'da 18 sano) ama aan oggolaanshahooda la haysan, ayaa mabda 'ahaan sharci darro ah, oo sharciga waafaqsan. Kor ka fiiri shuruucda dambiyada ugu caansan ee la adeegsado.
Lahaanshaha ama uruurinta sawirada ama sawirrada telefoonka ama kombiyuutarka
Haddii adiga, ama qof aad taqaanid, aad haysatid wax sawirro ah ama fiidiyow ah oo qof ka yar 18 sano ah, asaga ama ayada waxay farsamo ahaan ku haysan doonaan muuqaal aan wanaagsaneyn cunugga xitaa haddii ay isku da'da yihiin. Tani waxay ka soo horjeeddaa qaybta 160 ee Xeerka Caddaaladda Dambiyada 1988 iyo qaybta 1 ee Ilaalinta Xeerka Caruurta 1978. Adeegyada Xeer Ilaalinta Maxkamad waxay u gudbi doonaan oo keliya maxkamadeynta kiisaska ay u arkaan inay danta dadweynaha ku jirto in sidaas la sameeyo. Waxay ku xisaabtami lahaayeen da'da iyo nooca xiriirka dhinacyada ay khuseyso. Haddii sawirro lagu soo dhejiyo internetka iyadoon oggolaansho la helin iyada oo ujeedadu tahay in la bahdilo ama dhibaato la abuuro, taasi waxaa loo tixgeliyaa 'qaawan aarsasho' waxaana lagu soo oogi doonaa iyada Sharciga Caddaaladda Dembiilaha 2015 Qaybta 33aad. Eeg halkan hagida ku saabsan dacwad ku soo oogida Ingriiska iyo Wales.
U dirista sawirrada ama fiidiyowyada
Haddii ilmahaagu ka yar yahay 18 sano oo isagu ama iyadu ay u dirto, u gudbiso ama u gudbiso sawirro aan fiicnayn ama fiidiyoolo saaxiibbadaa ama saaxiibbadaa / saaxiibbadaa, tan ayaa mabda 'ahaan sidoo kale jebineysa qaybta 1 ee Sharciga Ilaalinta Carruurta 1978. Xitaa haddii ay yihiin sawirro isaga ama lafteeda, dabeecadda noocan ah waxay ahaanaysaa 'qaybinta' sawirro aan wanaagsanayn oo carruurta ah.
Waa tan si aad u fiican Tallaabada Tilmaanta Talaabo ee Jinsiga waxaa qoray Xarunta Sharciga Sharciga ee Dhallinyarada. Sida tan Warqad Kooban oo Bileyska Booliiska ah, “Dhalinta ay soo saareen sawirrada galmada waxay ka koobnaan karaan wadaag wadaag la wadaago iyo ka faa'iideysi Galmada la ogolaado uma badna inay soo jiidato booliska. Baadhitaanka dambiyada iyo dacwad ku oogista dambiyada muuqaalka ee ku taxan warbixintan waxay ku haboonaan doonaan iyadoo ay jiraan sifooyin sii xumeynaya sida dhiig-miirashada, qasabka, ujeedo macaash ama dadka waaweyn oo ah dambiilayaal maadaama ay tani ka dhigan tahay Xadgudubka Galmada Carruurta (CSA). ”
Welwelka dhabta ahi waa in xitaa wareysiga booliisku ay ku dambeyso in qofka dhalinyarada ah laga diiwaan geliyo Diiwaanka Qaranka ee Booliska. Xaqiiqadan waxay ka muuqan kartaa jeegareynta shaqooyinka marxalada dambe haddii qofku u baahan yahay inuu dalbado soo bandhigid wanagsan. Waxay sidoo kale soo bandhigi doontaa jeegagga xitaa shaqada tabaruca ee dadka nugul, carruurta ama waayeelka.
Bilayska Kent ayaa sidoo kale caddeeyay inay ka fiirsanayaan ku amraya waalid sida qofka mas'uulka ah ee heshiiska kula jira taleefanka casriga ah ee soo diray sawirka / videoga xumaaday.